NEMATODES STRAWBERRY: NOOCYADA TIKIDHADA BEST - STRAWBERRIES
Mid ka mid ah cadowga ugu xun ee bannaanka u yihiin dirxiyo cabsi - nematodes. Waa duufaan wareegsan oo ku saabsan 1 mm dheer. Waxay ku xidhan tahay astaamaha dhirta, wuxuu isku duraa walax gaar ah oo keena fal-celin kiimikaad, taasoo ka dhalatay unugyada dhirta ay noqdaan cunto ku habboon kuwa dulinka ah.
Sida loo ogaado cayayaan
Iyadoo loo eegayo xajmigeeda microscopic, suurtagal ma ahan in la ogaado nematode leh indhaha qaawan. Laakiin haddii aad ka shakisan tahay joogitaanka dulin, qashin geedka iyo si taxadar leh u baaro nidaamka xididka. Rootiyada la taaban karo ayaa la caleemo saari doonaa cysts cad oo u eg miraha poppy.
Ma taqaanaa? Qof kasta oo labaad ee dunida ah waa sidee ah nematodes, ascarids iyo whipworms - sedexda ugu badan ee dulin.
Hab kale waa in la burburiyo ubaxa, caleemaha, afkoda iyo iyaga ku biyo diidaya. Ka dib 6-12 saacadood, fiiri xalka iyada oo loo marayo galaas weyn. Haddii ay jiraan biyo-ku-duur-joogta, wax-ka-soo-saarka laf-dhabarka ayaa la arki doonaa.
Strawberry Nematode marka ugu horeysa, waa halis sababtoo ah waxay ku dhowdahay in la ogaado heerka wajiga hore ee dhalmada. Sidaas darteed, waxay si tartiib tartiib ah u waxyeeleeyaa ciidda iyo dhirta, ka sii daraysa dhalidda, ama xitaa keeneysa maqnaansho buuxda. Dhaawac xoog leh oo dhirta laga helo ayaa lagu arkay:
maqaarka iyo caleenka caleen;
koritaanka gaaban ee caleemaha iyo afkoda, sababtoo ah jabinta nidaamka xididka;
ubax liita ama ka maqan;
xadgudub ku ah qaabka dabiiciga ah ee berry.
Ma taqaanaa? Khatarta ka imanaysa nematode ayaa dhacda marka ay dhacdo in tiradiisu ka sarreyso 1000 boogi 100 mitir oo laba jibbaaran. arag
Qofku wuxuu kaloo yeelan karaa dhowr cudur oo keena nematodes. Calaamadaha soo socda ayaa tilmaamaya jahwareerka jirka ee dulin-naanyadan:
anorexia, lallabbo, matag;
tamar darro guud oo ay sababtay suntan;
dhibaatooyinka maskaxda ee suurtagalka ah, niyad-jabka.
Sida aad arki karto, marka laga reebo burburinta dalagga, nematodes waxay waxyeelleyn kartaa bini-aadanka, sidaas darteed, dagaalka lagama maarmaanka ah waa lagama maarmaan.
Ma suurtogal in la sugo strawberries
Dagaalka ka dhanka ah nematode ee strawberries waxaa fuliya habab kala duwan, laakiin dhammaantood waxay leeyihiin muuqaal caadi ah - tani waa geedi socod joogto ah.
Hababka dhaqameed ee wax ka qabashada:
Beerta ku xigta dhirta strawberry ee ka soo horjeeda nematodes: marigolds, marigolds, nasturtium, calendula.
Waa muhiim! Haddii lagu beeri dhirta noocaan oo kale ah suurtagal maaha, waxay ku saleysan yihiin infusions, taas oo lagu waraabiyo strawberries.
Beddel goobaha beeritaanka strawberry 4-5 sano kasta.
Dhowr beerto, godadka gacmaha ayaa lagu qodaa oo lagu daboolaa lime, taasoo saameyn burbur ku leh nematodeska.
Burburinta duurka qabay.
Bacriminta bacriminta ciidda. Waxay abuurtaa jawi wanaagsan oo loogu talagalay horumarka protozoan fungi, taas oo sidoo kale burburin dulin.
Daaweynta kuleylka ee baadiyaha cudurka qaba. Warshad waa in la qodayaa, dhaqday oo xididdada biyo ku shubaa heerkul ah illaa 50 ºC. Istaag 5 ilaa 20 daqiiqo.
Laakiin inta badan kiisaska infakshanka xooggan ee aan lahayn kiimikooyin ayaa sameyn karin. Si loola dagaallamo dulin-goojeyaasha-dillaacan waxay soo saaraan noocyo kala duwan oo ah walxaha - nematosides. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah:
Daroogada ugu dambeysa waa mid aad u sun ah, daaweyntu waa in lagu sameeyaa oo kaliya dharka dhaadheer, gacmo gashi gacan-qabsi ah iyo neef-qabe.
Waa muhiim! Wax ka qabashada mid ka mid ah daroogooyinka ayaa la qaadaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, iyadoo joogitaanka miraha wax lagu kariyo kiimikada la mamnuuco.
Kahortaga: sida loo ilaaliyo loona nuugo geedo
Sida qiyaasta ka hortaga ah ee nematode stem, waxaa lagu talinayaa in ay raacaan talooyinka soo socda:
Geedo strawberry ka hor beerashada, biyo raaci. Nidaamka xididada milixda (1 qaado oo ah 1 litir oo biyo ah) adoo ku qulqulaya 15 daqiiqo.
Geedo caafimaad leh ayaa la doorbidaa daaweynta jeermiska ("aqueous solution" Parationa "," Fosdrina ").
Isticmaal geedo lagu beeray ciidda caafimaadka leh. Gubashada seedling haddii aad ka hesho xitaa raadadka ugu yar ee dulin.
Sidaad u aragtay, nematode on a strawberry khatar badan, laakiin qaababka la tixgeliyaa ee gacanta ku caawin doona in la burburiyo ama ugu yaraan hoos u dhigi tirada, iyo sawirro muuqaalku fududayn doonaa aqoonsiga ee ay duurka ay arrintani.